कर्णालीमा सरकार जोगाउने अन्तिम कसरतमा माओवादी केन्द्र, जोगिएला मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ? - Deutikhabar कर्णालीमा सरकार जोगाउने अन्तिम कसरतमा माओवादी केन्द्र, जोगिएला मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ? - Deutikhabar
कर्णालीमा सरकार जोगाउने अन्तिम कसरतमा माओवादी केन्द्र, जोगिएला मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार ?
जगतदल जनाला बिक / सुर्खेत
अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले आज (शुक्रवार) बोलाइएको प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत लिँदै छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले आजको प्रदेशसभा बैठकमा सरकार जोगाउने अन्तिम कसरत स्वरूप विश्वासको मत लिँदै छन्।
यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत पाउलान् त ?
प्रदेशसभाको अहिलेको अवस्था हेर्दा एमाले बाहेकका सांसदको समर्थनबिना बहुमत पुग्ने देखिँदैन। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले ३९ सांसद छन्। यो अवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २० सांसद आवश्यक पर्छ। तर, यो संख्या एमालेबाहेक अन्य सबै दलको संख्या जोडेर पनि पुग्दैन।
प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२ सांसद छन्। उसलाई बहुमतका लागि थप ८ सांसद आवश्यक पर्छ। तर, प्रदेशसभामा एमाले र माओवादी केन्द्रबाहेक अन्य दलका सांसदको संख्या जम्मा ७ मात्रै छ।
प्रदेशसभामा काँग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन्। अर्थात् मुख्यमन्त्री शाहीलाई एमाले बाहेकका सबै दलले समर्थन गरेको अवस्थामा पनि उनको पक्षमा १९ सांसद रहन्छन्, यो प्रदेशसभाको बहुमत सांसद संख्याभन्दा १ कम हो।
तर, मुख्यमन्त्री शाही प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने दाबी गर्छन्। काँग्रेस र राप्रपाका सांसदले विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने उनको दाबी छ। तर, यो अवस्थामा पनि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको बहुमत पुग्दैन।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न काँग्रेसले सहमति जनाएको छैन। काँग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले माओवादी केन्द्रसँग प्रदेशसभामा समर्थन गर्नेबारे छलफल र सहमति नभएको जिकिर गरे। कर्णालीमा सत्ता सहकार्यबारे काँग्रेसले निर्णय नगरेको उनले बताए। एमालेले भने मुख्यमन्त्री शाहीको विश्वासको मत लिने प्रयास असफल हुने दाबी गरेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत नपाएर प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिने र भोलि (वैशाख ४ गते) प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्री बन्ने एमालेको दाबी छ। एमालेका प्रदेश सांसद अम्मरबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री शाहीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले आफ्नो अन्तिम प्रयासका लागि भनेर प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो, केही गर्न सकिन्छ कि भनेर अन्तिमसम्म प्रयास गर्नु त स्वभावीकै हो,’ सांसद थापा भन्छन्, ‘उहाँले विश्वासको मत पाउनुहुन्न। संसद्मा सम्बोधन गरेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिई नयाँ सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ।’
एमाले नेता एवं कर्णाली प्रदेशका पूर्वसांसद् धर्मराज रेग्मीले प्रदेशसभामा बहुमत नभएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाहीले पदमा बस्नु नैतिकता नभएको बताउँछन्।
माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीसँग नैतिकता भए बैठक बस्नुअगाडि नै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाव दिए।
‘आफू अल्पमत छु भन्ने हेक्का रहँदारहँदै पदमा बस्नु राम्रो पक्ष होइन,’ मुख्यमन्त्री शाहीलाई लक्षित गर्दै उनले भने।
पार्टी छाडेर एमाले प्रवेश गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले रेग्मीलाई कारवाहीस्वरूप पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। त्यसपछि उनको सांसद पद गुमेको थियो। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) छँदै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूह छाडेर केपी शर्मा ओली समूहमा प्रवेश गरेका रेग्मी सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि एमालेको ओली समूहमै रहेका छन्। एमालेले रेग्मीलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सचिवमा मनोनीत गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन माओवादी केन्द्रको अपिल
यता माओवादी केन्द्रले भने आजको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिन अपिल गरेको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेशसभा दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीद्वारा जारी अपिलमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मत दिन सबै राजनीतिक दल तथा सांसदलाई अपिल गरिएको छ।
नेपालीले आफ्नो दलले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको जानकारी समेत गराएकी छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा बजेट प्रस्तुत(पूर्णपाठसहित)
प्रधानमन्त्री भारत जाँदै
मप बिश्वबिध्यालय बार्ता समिती र सन्युक्त बिध्यार्थी समिती बिच छलफल